"Muuse Biixi miyuu Somaliland ka qabtay Cigaal Mise Cigaal ayaa Somaliland ka qabtay"?
Monday June 17, 2019 - 22:45:13 in Wararka by Super Admin
Madaxwaynihii labaad ee Somaliland Maxamed Xaji Ibraahim Cigaal casharo badan ayuu Somaliland uga tagay duruustaas waxa kow ka ahayd siyaasad ka saaristii Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha hadda ... Siduu uga saaray Siyaasadda gabi ahaanba Muuse Biixi, yaase ku soo celiyay saxadda, sidee ayuuse ugu soo laabtay ...?
Cigaal siyaasi mawjad ah oo qotadiisa dubaladeed gun dheertahay ayuu aha Alle hawnxariiste, wuxuu yidhi "Inanku waa Inankagii haddu xilka aan ka qaaday dib u qaadanaayo hadda ayaan magacaabaya ee waydiiya". Waydiinay oo wuu qaadanaya ayaa la yidhi, Intuu Galinkii hore magacaabay ayuu kii Danbe ka qaaday... In aanu Muuse Biixi siyaasi ahayna wuu xaqiijiyay, waayo Madaxweyne xil ka qaaday u jeedadii uu kaga qaaday ayaa nool macquul maha inuu haddana isla markiiba dib kugu magacaabo. Waa halka ay ku soo baxday "Waa Rafadkay Rafanaysay". Muuse Biixi Cabdi markii Cigaal alle hawnaxariiste waqcadaas ku sameeyay qalbada ayaa jabtay, Dagaal waxba lama hadhin, Intase tariikhda haysa ayaa hayse Maxamed Xaji Ibraahim Cigaal ilaa jifadiisa hoose ayuu ka ka xaystay oo uu cid ka waayay .
Waa markay Wasiir Daakhiliga noqonayaan Axmed Jaanbiir Suldaan iyo Ismaciil Shaqalle oo Taliyaha Ciidanka Qaranka noqonaaya iyo Jiilkaasi... Muuse Biixi ayuu meesha kaga saarayay Cigaal, waa xilliga uu Muuse Biixi leeyahay "Ma maanta ayaad awoodi ku soo koobtay in Suldaan idin wada xukumo, kkkkk "Daakhiligii Taliyhii Ciidamadda, Xaakimkii " waa marka uu sidaa leeyahay .. Muuse Biixi Geelisa ayuu raacday, gabi ahaanba Siyaasadda banaanka ayuu ka dhigay Cigaal, intii ogayd ayaa ogayd halkaas iyadoo maraysa ayuu Cigaal unkay nadaamka Axsaabta badan (Xisbiyada) UDUB ayuu ku dhawaaqay, Dr. Cabdi Aw Daahir ayuu Xoghayihii Guud uga dhigay isla markaana ahaa Wasiirka Caafimaadka, Cali Warancadde oo isku waday jagada Xoghayaha ayaa muraaladilaacay, waa sababtii uu kaga baxay Xukuumaddii Cigaal, furidii ururada siyaasadda ayaa ragg badan oo buulka ku jiray qoorta la soo kaceen, Ururkii SAHAN ayay isku uruursadeen ragg ay ka mid ahayeen Muuse Biixi, Cali Maxamed Warancadde, Alle hawnaxariste Maxamed Cabdi Iskeerse, oo dhammaantood ay Madaxweyne Cigaal isa soo seegeen, waxaa Guddoomiye u noqday Xildhibaan Prof Maxamed Cumar Jiir oo wali ku jira Golaha Wakiilada. Muu tisqaadin SAHAN markii hore markii danbena Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa waddo cad ka mariyay Muuse Biixi Cabdi.
Isagoo barakace siyasadeed ah ayuu u gacan haadiyay Axmed Maxamed Siilaanyo oo KULMIYE markaa hawada galiyay, ragg dhalinyaro u badanaana haysta, Jabhadii SNM way ku yarayd aasaaskii KULMIYE, dhalinyaro saxad ku cusub oo Dr. Axmed Xaashi Oday ugu wayn yahay oo Cigal Aagaasime u soo noqday, Cabdicasiis Maxamed Samaale, Maxamed Iid Dhinbiil ragg nocaas ah ayuu hastay KULMIYE SNM Daa'uud Maxamed Geele alle hawnaxariisto oo Xoghaye Guud noqday iyo Cali Guray ayuu ka haystay . Muuse Biixi sidaa ayuu Siilaanyo siyaasadda ugu soo celiyay balse Cigaal wuu ka saaray ..